Tsy mandeha ny Smartflix: Ny safidy tsara indrindra | Androidsis
DaniPlay | 02/09/2021 09:00 | Nohavaozina amin'ny 05/09/2021 10:04 | Fampiharana Android
Ny iray amin'ireo VPN manana fitomboana avo indrindra noho ny fahafahany mampiasa amin'ny Netflix dia Smartflix. Tsy miasa miaraka amin'ny serivisy fisoratana anarana amerikana izao ny rindranasa, fa ny hafa ivelan'ity fitaovana fanta-daza ity, izay manantena ny ho sitrana tsy ho ela io endri-javatra manan-danja io.
Ny VPN maimaim-poana dia miasa matetika amin'ny tranga sasany, fa ny manana hafainganam-pandeha sy filaminana lehibe kokoa dia tsara ny manararaotra drafitra karama. Miankina amin'ny firenena ifandraisantsika ny haingam-pandeha, fa ny hafainganam-pandehany dia mazàna hafainganam-pandeha mitovy, raha tsy izany dia hitantsika ny atin'ny faritra izay ampifandraisintsika.
Fantaro ny safidy tsara indrindra amin'ny Smartflix, ny tsirairay amin'izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny solosaina iray na maromaro, satria ny tsirairay amin'izy ireo dia manana kaonty marobe. Maro amin'izy ireo no multi-system, misy amin'ny Android, iOS, Windows ary na amin'ny fahitalavitra Smart fanta-daza aza.
9 Thunder VPN
Izy io dia iray amin'ireo VPN misy hetsika mandritra ny taona maro ao amin'ny tambajotra, misy 15 taona ao aoriany ary manolotra serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra mampiasa azy isan'andro. Haingam-pandeha haingam-pandeha CyberGhost VPN haingam-pandeha haingana sy angon-drakitra tsy voafetra, maharitra hatrany ny fifandraisana.
CyberGhost VPN mifandray amin'i Netflix avy any Etazonia, France, United Kingdom, Alemana, Japan ary mazava ho azy, miaraka amin'ny Netflix Spain sy faritra hafa koa. Ankoatr'izay, ny serivisy dia miasa miaraka amin'ny baolina kitra, mba hahafahanao mifandray amin'ny sehatra samihafa, ao anatin'izany ny fahitana ny fiadiana ny tompondakan'i Champions, ligy eropeana ary amboara hafa.
Ny hafainganam-pandeha avo indrindra dia ny natolotry ny UK miaraka amin'ny 55 MbpsRaha nahatratra ny 11,8 Mbps ny hafainganam-pandehan'ny upload. Ny fifandraisana amin'ireo mpizara hafa dia mitazona haingam-pandeha sy filaminana lehibe, mifandray amin'ny Netflix sy serivisy mivantana hafa.
VPN avy amin'i CyberGhost - Fiarovana WiFi haingana sy azo antoka
Miatrika ny mety ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Smartflix izahay, miaraka amin'ny fitoviana maro ary amin'ny endrika ivelany matihanina. PrivateVPN dia aseho ho VPN tsy fantatra anarana miaraka amin'ireo mpizara miaraka amin'ny Protocol OpenVPN, L2TP, PPTP, IPsec, IKEv2, HTTP Proxy ary SOCKS5, misy ao anaty ny fampiharana foana izy rehetra.
Manana mpizara eran'izao tontolo izao izy, miaraka amin'i toerana any Austria, Suède, Switzerland, USA, Great Britain, Danemark, Frantsa, Luxembourg, Norvezy, Failandy, Romania, Alemana, Rosia, Netherlands, Singapore, Kanada, Aostralia, Italia, Espana, Polonina ary Ukraine, ankoatry ny fanitarana mpizara matetika any amin'ireny firenena ireny.
Ny iray amin'ireo tsiambaratelon'ny PrivateVPN dia ny manavao matetika ireo adiresy IP ka Netflix tsy afaka milaza izay avy amin'ny VPN. Netflix tsy afaka manakana ireo IP sendra, ka PrivateVPN dia azo antoka fa vahaolana haingana raha te hijery atiny manokana amin'ny faritra sasany ianao. 9,2 amin'ny isa 10 ny tombana.
VyprnVPN dia manakana ny Netflix any amin'ny firenena Etazonia, Fanjakana Mitambatra, Alemana ary Kanada, na dia hanitatra ny faravodilanitra miaraka amin'ny faritany hafa aza izy io. Mampiasa ny teknolojia Chamaleon izy handresena ny fameperana ara-jeografika, ankoatry ny fanovana ny lozisialy mpamatsy mba hiantohana ny fidirana, mety raha te hijery atiny amin'ny serivisy mivantana ianao.
Ny fampiharana dia mamela fifandraisana 30 miaraka sy angon-drakitra tsy voafetra, natao hampiasaina amin'ny fianakaviana lehibe izy, na dia amin'ireo orinasa mila tsiambaratelo aza. VyprnVPN dia safidy tsara amin'ny Smartflix, ankoatry ny hoe natao hampiasaina amin'ny Netflix sy ireo sehatra streaming hafa, ao anatin'izany ny HBO, Rakuten, sy ny maro hafa.
Ity serivisy VPN ity dia sehatra hafa, mihazakazaka amin'ny Windows, Android, iOS, macOS, Google Chrome, Firefox, Linux ary ny router, manampy izany koa ny fahitalavitra Smart. VyprnVPN ho an'ny hafainganam-pandeha dia iray amin'ireo haingana indrindra ary ny fiarovana dia mbola iray amin'ny tanjaky ny orinasa te-hanohy hivelatra tsy ho ela.
VPN: Ny tsara indrindra sy azo antoka VyprVPN
Safidy tsara amin'ny Smartflix amin'ny fanakanana ny Netflix any amin'ny faritr'i Etazonia, mampanantena kely izy io aorian'izay mba hanao izany amin'ny hafa toy ny Fanjakana Mitambatra, Alemanina, Kanada ary ny toeran-kafa. IPVanish dia mampiditra haingam-pandeha avo lenta, manan-danja indrindra rehefa mihodina manodidina ny tranokala ary tsy voafetra ny fantsom-pifandraisana.
IPVanish dia mifanaraka amin'ny Netflix, Hulu, Disney +, HBO, Amazon Prime Video, SlingTV, Vudu, ESPN ary DAZN, manolotra fifandraisana haingana ary ambonin'izany rehetra izany tsy misy fetrany amin'ireo firenena ireo. Ny fifandraisana dia natao tao amin'ireo mpizara 1.600, azo velarina satria te hanana mihoatra ny 5.000 izy ao anatin'ny herintaona.
Ny mifanentana ambony dia mahatonga azy io ho serivisy azon'ny olona an-tapitrisany maro nifanekena, satria azo ampiasaina amin'ny Windows, Android, iOS, macOS Chrome, Firefox, Linux, ny router ary ny Chromebook. Ny fifandraisana miaraka dia voafetra amin'ny drafitra voafidy, fa azo ampiasaina amin'ny solosaina mihoatra ny 30 amin'ny drafitra antonony.
IPVanish VPN: ny VPN haingana indrindra
Developer: Mudhook Marketing, Inc.
Ireo mpizara dia nohamarinina ho an'ny streaming Netflix any Etazonia, Frantsa, Japon sy Alemana, ankoatry ny fanaovana izany any amin'ny faritra hafa. Ny fantsom-pifandraisana, ny fifandraisana ary ny angon-drakitra dia tsy misy fetra, miasa ihany koa amin'ny serivisy Disney +, HBO, BBC iPlayer, Amazon Prime Video ary Showtime.
ZenMate dia VPN manan-danja miaraka amina mpizara mihoatra ny 500 any Etazonia, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia te hampihatra ny hafa any amin'ny firenen-kafa izy, ary anisan'izany no nisafidianany an'i Espana. Izy io dia multiplatform, misy amin'ny Windows, système d'exploitation Android, iOS, macOS, Chrome, Linux, router, Chromebook ary fahitalavitra Smart.
Mihoatra ny 10 Mbps ny hafainganam-pandeha, ny fifandraisana dia vita amin'ny IP azo antoka, ankoatry ny afaka mifandray amin'i Netflix ary afaka mahita ny atiny rehetra. Safidy tsara amin'ny Smartflix izy io ary manantena ny hahavita dingana mandroso amin'ny taona ho avy amin'ny faniriana hanitatra ny faravodilanitra, ao anatin'izany ny any ivelan'ny firenena iasany.
ZenMate VPN - VPN haingana sy azo antoka
Miantoka ny fidirana amin'ny Netflix avy any Etazonia, fa koa ny an'ny faritra hafa toa an'i Alemana, Royaume-Uni, Japon ary firenena hafa. Ny fifandraisana miaraka dia hatramin'ny 12 farafahakeliny, ankoatry ny afaka ampiasain'ny solosaina samihafa ao an-trano ary na dia any am-piasana aza raha te hiasa amin'ny tontolo azo antoka ianao.
DaferVPN dia mifanaraka amin'ny serivisy ankoatr'i Netflix, ao anatin'izany ny Hulu, Disney +, HBO, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, ary Showtime. Ny fidirana amin'ny katalaogy ivelany dia ho amin'ny kinova voalohany, amin'izay ianao afaka mankafy atiny manokana hafa amin'ireo tranokala ireo.
Ny mifanentana amin'ny rafitra avo lenta no mahatonga azy io ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra, azo alaina amin'ireto fitaovana manaraka ireto: Windows, Android, iOS, macOS, Chrome, Firefox, Linux ary ny router. Ireo mpizara dia matetika haingana ary azo antoka amin'ny resaka fiarovana.
VPN maimaim-poana ho an'ny fiarovana Hotspot - SaferVPN
Ny rindranasa VPNhub dia iray amin'ireo azo itokisana indrindra raha mikasika ireo tranokala manakana, ao anatin'izany ny Netflix satria misy IP azo antoka. Mety raha te-hilalao soa aman-tsara amin'ny anarana tsy fantatra anarana ianao, ankoatry ny fidirana haingana, manana haingam-pandeha foana rehefa mifandray amin'ny mpizara any Etazonia sy firenena hafa.
Anisan'ireo asany, VPNhub dia manome fidirana amin'ireo mpizara eo an-toerana, fanoratana enti-miaramila, manafina ny IP sy ny toerana isaky ny mifandray amin'ny serivisy. hialana amin'ny fanakanana ny tranokala sy fidirana amin'ny Wi-Fi ampahibemaso soa aman-tsara. Ireo mpizara dia misy amin'ny toerana 60 mahery, miasa foana.
Ny fampiharana maimaim-poana dia manompo mpampiasa iray farafaharatsiny, ny fandoavam-bola dia ataovy amin'ny fitaovana marobe amin'ny fotoana iray, manome alalana azy rehetra. Ny kalitaon'ny fifandraisana dia tsara foana, ankoatry ny fananana angona tsy voafetra raha toa ianao ka te-hisintona rakitra avy amin'izy ireo.
VPNhub: Ny VPN tsy voafetra tsara indrindra, tranokala fanakanana.
Developer: Appatomic Ltd.
FlixVPN dia efa iray amin'ireo serivisy tsara indrindra hanakanana an'i Netflix, izay safidy tsara indrindra amin'ny Smartflix ankehitriny. Netflix dia miaraka amina serivisy streaming hafa toa an'i Hulu, HBO, Disney + ary maro hafa, izy rehetra dia azo idirana amin'ny fampiharana amin'ny Android sy ny rafitra miasa hafa.
Misy dikan-teny roa an'ny FlixVPN, ny kaonty maimaim-poana misy fetrany, fa mety raha tsy te-handoa vola amin'ny famandrihana VPN hafa ianao. Ny kaonty premium FlixVPN dia tsy misy famerana fotoana, amin'ny maimaim-poana dia misy filaharana olona ary miasa mandritra ny fotoana iray i Netflix.
Tsotra ny fampiasana ny rindranasa, miaraka amin'ny connect dia ho afaka hitety ianao amin'ny pejy isan-karazany mora sy azo antoka. Ny tombana dia 3,5 amin'ny kintana 5, saingy miakatra izany satria olona maherin'ny 500.000 no nanomboka nampiasa azy io latsaky ny herintaona lasa izay.
FlixVPN - Sakano ny Netflix VPN Maimaimpoana
Izy io dia iray amin'ireo VPN maimaim-poana indrindra raha ny amin'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra azo antoka, ho fanampin'izay, mamela anao hiditra serivisy mivantana toy ny Netflix. Ny fifandraisana avy amin'ny mpizara any Etazonia dia manome fidirana amin'ny atiny avy amin'io firenena io, fa koa amin'ny an'ny United Kingdom sy Alemana.
Thunder VPN dia mamela anao hiantoka ny fifandraisana amin'ny Wi-Fi ampahibemaso, na avy amin'ny ivon-toeram-pivarotana, kioska, seranam-piaramanidina, ary koa tranokala hafa. Thunder VPN dia afaka mifandray amin'ny kaontinanta telo, Eropa, Amerika ary AziaTsindrio ny saina raha te hifandray amin'ny firenena manokana ianao.
Matetika haingana ny hafainganam-pandehan'ny mpizara, mampifandray amin'ny mpizara sy ny hafainganam-pandeha mampanantena izay mety hahatratra 15-20 Mbps. Toy ny hafa, ny Thunder VPN dia manana kaonty Premium misy fifandraisana tsy voafetra, na amin'ny lafiny fotoana na amin'ny fampidinana, indrindra raha misintona rakitra ianao.
Thunder VPN: VPN azo antoka indrindra
Developer: Labalin'ny famantarana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Tsy mandeha ny Smartflix: ny safidy tsara indrindra